साताको तस्वीर : हिउँमुनि ढोरपाटन ! – ebaglung.com
२०७५ माघ १३, आईतवार १७:५०	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
शव्द/चित्र : दीपक पराजुली,
ढोरपाटन (बागलुङ) २०७५ माघ १३ । ढोरपाटनमा हिमपात भैरहेको छ । चारैतिर बाख्लो हिँउ ढकमक्क देख्न सकिन्छ । करिब ३ फिट हिउँले ढोरपाटन ढाकिएको छ । एकछिन रोकिएपनि हिउँपर्ने सिलसिला थामिएको छैन । अस्ति माघ ११ गते रातिको भारी हिमपातले त ढोर उपत्यका सेताम्य बनेको छ । एकै शव्दमा भन्नु पर्दा हिउँमुनि ढोरपाटन छ ।
ढोरपाटनमा बस्ने स्थानीयबासी अधिकांश जोडो छल्न यस मौसममा बेसी बोवाङ गाउँ झरेका छन् । उनिहरु अब फागुनको आखिरी देखी चैतको पहिलो हप्ता तिरमात्र गाईबस्तु लिएर ढोर फर्कन्छन् । कात्तिक महिनाको तेश्रो साता ढोरबाट स्थानीयहरु बेसी झर्ने प्रचलन रहि आएको छ । गाउँलेहरु मिलेर सामुहिकरुपमा दुईचार जना हेरालु राखेर उनिहरु बेसी गाउँ झेरेका छन् ।
यतिबेला ढोरमा धेरैकम स्थानीयहरु बसोबास गर्छन् । तर जो छन उनिहरुको जीवन एकदमै कष्टकर छ । यसवर्षको हिमपात झण्डै ४० वर्ष पछीको बाख्लो भएको बुढापाकाहरुको भनाई छ । स्थानीय जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । ढोरमा रहेकाहरु एकदमै जाडोले कठ्यांग्रिएको बताई रहेका छन् । ढोरपाटन शिकार आरक्ष र नेपाली सेनाको हनुमानध्वज गुल्ममा कार्यरत कर्मचारी सेनाहरु चिसोमा जीवन विताउन बाध्य छन् ।
ढोरपाटनको हिमपातको मनोरम दृश्याबलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटकहरु पुग्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय ढोरपाटन अवलोकन गर्न हिँडेका विभिन्न जिल्लाका टोलीहरु अत्यधिक हिमपातले गर्दा ढोरपाटन नपुगी केहि तल रहेको फल्ले घरबाट फर्किरहेका छन् । चितवन मेडिकल कलेजबाट ढोरपाटन हिँडेको टोली र गुल्मीको अर्को टोली बोवाङ माथीको फल्ले घरबाटै आलु खाएर फर्किए । भारी हिमपातले ढोर पुग्ने अवस्था छैन । तैपनि ढोरपाटनको हिमपात हेर्न लालायित आन्तरिक पर्यटक दुख सहेरै भएपनि बोवाङ गाउसम्म त पुगिरहेका छन् ।
बोवाङ गाउँ देखी हिमपातको दृश्य देख्न सकिन्छ । यहि दृश्यावलोकन गरेर पर्यटकहरु फर्किरहेका छन् ।
यस हरफकार र अर्का एक साथीलाई बोवाङ र फल्लेघरका स्थानीयले हरहालतमा ढोर नजाने सल्लाह दिएका थिए । उनिहरुको सल्लाहा अनुसार चितवन र गुल्मीको टोली फर्किएपनि हामी दुई साथीहरु नगै नहुने अवस्थाका कारण कष्टकर यात्राका बीच माघ ११ गते ढोरपाटन पुग्यौँ । त्यस राति भीषण हिमवर्षा भयो र हिँजो र आज (माघ १२ र १३ गते) त्यहाँको हिमपातको स्वर्णिम दृश्यलाई क्यामरामा कैद गरी यहाँ प्रस्तुग गरिएको छ ।
भारी हिमपातले ढोरपाटन उपत्यका सेताम्य, आजको मौसम यस वर्षकै चिसो… !
ढोरपाटनमा हिमपातको दृश्यावलोकन गर्न आउने पर्यटकहरुको संख्यामा बृद्धि !
ढोरपाटन बागलुङ बुर्तिवाङ
भीरबाट लडेर एक पुरुष र रुखबाट खसी एक महिलाको मृत्यु !